Daawo muuqaalka: Shir nabadeed ka dhacay deegaanka Dhabad ee gobolka Galgaduud |
Daawo muuqaalka: Shir nabadeed ka dhacay deegaanka Dhabad ee gobolka Galgaduud
Shir nabadeedka oo uu soo agaasimay maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa waxaa maanta lagu qabtay duleedka bari ee deegaanka Dhabad ee gobolka Galgaduud, iyadoo ay ka soo qayb galeen mas’uuliyiin kala duwan, madax dhaqameedyo, Nabadoono iyo waxgaradka, waxaana kulankaasi looga arrinsanayay sidii looga hortagi lahaa colaad beeleedyada bilaawda xilli roobaadka.
Gudoomiyaha deegaanka Dhabad Aadan Gabi ayaa waxa uu sheegay inay labada dhinac isku afgarteen ka wada shaqaynta nabadgalyada iyo in la sii wado kulamada wadatashiga ah ee dhaxmara beelaha wada daga gobolka.
Wasiirka arrimaha gudaha Ximan iyo Xeeb Cumar Maxmed Diiriye ayaa isna sheegay in kulankaasi ay ka soo baxeen qodobo muhiim ah oo ku aadan nabadgalyada iyo daris wanaaga, waxaana uu hoosta ka xariiqay in gacan bir ah lagu qaban doono cid walba oo carqaladaysa ammaanka.
Kulanka ayaa lagu soo beegay waqti muhiim ah oo ah bilowga xilli roobaadka Guga oo inta badan reer guuraagu ay ku dagaalamaan daaqa iyo biyaha, waxaana kulankan uu daba socday kulamo nabadeed oo horay u dhax maray waxgaradka Dhabad iyo Cadaado.
Halkaan hoose ka daawo sida uu u dhacay shirkaani oo dhameystiranm